Ungayivula njani i-Megaphone Login + ye-smartphone? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungayivula njani i-Megaphone Login + ye-smartphone?
Kulula kwaye ngokwenene ukutshintsha i-firmware yefowuni
Ukuba, nangona kunjalo, enye indlela yinkimbinkimbi ngakumbi
Ukwenza oku, faka i-SIM khadi yomnye umsebenzisi kwifowuni
Xa ucele ikhowudi- musa ukuyifaka
Emva koko landela i-algorithm elandelayo
* # 9 # - Telephony - Simme Lock - Inethiwekhi yeeNgcaciso zeeVenkile -Vula - 20141025
Cofa, chwetheza, ulandele i-algorithm apha ngasentla.
Kwaye iya kuthi yenze into oyifunayo-oko kukuthi, ukuvula i-smartphone oyifunayo
I-Megafon Login + i-smartphone yenzelwe ukufaka kuphela ikhadi le-Megafon SIM. Ukuba ufaka enye i-SIM khadi, kuya kufuneka uyivule.
Vula iMegafon yokungena + kungenzeka, kodwa xa usenza oku, yazi ukuba lonke uxanduva luphumle ngawe. Ukuba usathatha isigqibo, ungakwenza oko ngokwenkqubo elandelayo:
Ewe kona, ukuze ukwazi ukusebenzisa i-smartphone usebenzisa i-SIM khadi yayo nayiphi na into engeyiyo iMegaphone, kufuneka ivulwe kuqala.
Oku kunzima kakhulu ukwenza, ngoko ndicebisa ukusebenzisa imiyalelo yamanyathelo ngamanyathelo.
Okokuqala kufuneka sikhuphele le nto uyisebenzisayo. Okulandelayo silandela:
Ewe kunjalo, eli shishini alikho semthethweni ngokupheleleyo, kodwa ngamanye amaxesha kuya kufuneka / ufune ukuvula le fowuni. Kuba kukho isidingo sokusebenzisa ii-SIM khadi zabanye abaqhubi.
Ukuba uthatha isigqibo sokuyenza le nto, uze ulandele le miyalelo ilandelayo yokuvula / ukuvula i-megaphone Login kunye:
Jonga ividiyo-imiyalelo malunga nendlela yokwenza oku:
Ngokwesiqhelo, ukuvula ifowuni, kufuneka utshintshe i-firmware. Kodwa kwezinye iifowuni, ungayenza ngaphandle kwazo. Kuya kufuneka uyazi ukuba emva koku ifowuni inokungasebenzi ngokufanelekileyo. Ke lumka. Nantsi into esiyenzayo:
Akukho lula ukusebenzisa ikhadi leSIM elingelilo lendawo kwifowuni yaseMegafon Login Plus, kuba inkampani iza nenani lezithintelo ukuyikhupha phantsi, kuba kufuneka wenze umzamo wokuvula ifowuni.
Ndicebisa ukuba uziqhelanise neklip yevidiyo, apho bathetha malunga nendlela yokwenza ifowuni iphinde isebenze kunye nekhadi le-SIM elongezelelweyo.
Umbuzo ovuthayo kwabo bathenga iifowuni kwinethiwekhi yesalons Mesafon. Ke ukuba I-Smartphone Megafon Ukungena + Andiqali ukubona i-SIM khadi ye-Megafon kuphela, kwakuyimfuneko ukwenza oku kulandelayo: ukuvula njengakwividiyo
Ukuvula i-smartphone, yenza oku kulandelayo:
Okokuqala kufuneka ufake i-SIM khadi yomnye umsebenzisi. Oku kunokwenziwa kokubini nakwi-slot yesibini.
emva koko vula i-smartphone kwaye ucinezele i-quot; hang hang quot; xa iyakufuna ikhowudi yokuvula.
Okulandelayo, uya kudinga ukufaka la manyathelo alandelayo: * # 9 #.
uze uye kule thebhu: TELEPHONY
Uluhlu luvela apho kufuneka ukhethe into ye-SIMMY LOCK, isezantsi kakhulu. Okulandelayo, khetha ubuNtu be-NETWORK kunye ne-UNLOCK.
Isenzo sakho sokugqibela kukungena kwikhowudi yokuvula. Ndiye: 20141025.
Ihlala kuphela ukuqala kwakhona i-smartphone yakho. Hlala wazi nje ukuba isenokungasebenzi ngokuchanekileyo.
Ihlala ivuliwe ngokulula, kodwa inye kuphela ikhadi leSIM elisebenza emva kokuvula. Xa uqalisa ukusebenzisa i-SIM khadi yomnye opharetha, ifowuni ifuna ikhowudi yokuvula, ukuphendula oku, cofa umnxeba wokugqibela kwaye ucofe * # 9 # kwaye uye kwi-Telephony tab, emva koko u-Simme utshixe i-Network personalization Unlock. Emva koko, faka ikhowudi yokuvula ka-20141025.
Nangona kunjalo, ndingathanda ukulumkisa ukuba ukuvula le fowuni kukubiwa kwayo, kwaye kubandakanya uxanduva lolwaphulo-mthetho. Umqhubi unokufumana ulwazi malunga neemeko zokuvula iifowuni (umsebenzi onjalo ungena lula kwi-firmware), kwaye ngokubhekisele kwisazisi somnini, uhlala kuhambisa le datha emapoliseni.
Ukuze uvule i-Megaphone Login ye-smartphone, unokuyicacisa kwakhona. Ukwenza oku, kuya kufuneka uqale ukhuphele inkqubo ekhethekileyo kulo msebenzi kwaye ukhuphele inkqubo yokusebenza ye-android.
Emva koko xhuma ifowuni kwikhompyuter kwaye uthathe isenzo.
Imibuzo ye-31 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,399.